AC Millan vs Inter Milan: Waa tee kooxda iska leh ama dhisatay garoonka San Siro? & Waqtiga ay qaadatay in la dhiso garoonka ugu weyn Talyaaniga - Hargeele - Wararka Somali State
(Milan) 18 Nof 2019. AC Milan iyo Inter Milan waa labo kooxood oo ay ka dhaxeyso cadaawad kubadda cagta ah, waxaana ay wadagaan magaalo iyo garoonba haddaba sidee ayey ku dhacday in labadan kooxood ay isku garoon ku ciyaaraan muddo badan, maadaama ay si weyn u coltamaan?.
Waxa aynu Warbixintaan idin kugu soo gudbin naynaa sirta ku duugan in labadan kooxood ay iminka wadaagaan Garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza, kooxdii markii hore dhisatay, waxa uu kulanku kaga dhigan yahay taageerayaasha iyo ficilladooda layaabka leh, jawiga magaalada sida uu noqdo marka la ciyaarayo iyo xogo kale oo laga yaabo inaadan waligaa maqlin ayaan kuugu soo gudbinaynaa.
Xogo badan oo ku saabsan garoonkan Taariikhiga ah ee San Siro oo kaa dahsoon ku daawo muuqaalkan.
Kooxda Barcelona oo diyaar u ah inay iska iibiso bartilmaameedkii Man United iyo AC Milan